भारतीय सेना प्रमुख शिकार खेल्न नेपालमा - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	भारतीय सेना प्रमुख शिकार खेल्न नेपालमा
29th October 2020 29th October 2020 55 views
विभिन्न पत्र पत्रिकामा हालै भारतीय सेना प्रमुख यही कार्तिक १८ गते नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा प्रचार गरिएको छ । प्रत्येक पल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कुटनीतिक ब्यक्तिहरु नेपालमा आउँदा नेपालले केही न केही नेपाली सार्वभौमसत्तासंग सम्वन्धित चीजहरु गुमाउनु परिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरी नेपालमा नाकाबन्दी गरेको पछिल्लो उदाहरण छँदैछ । त्यस्तै अटल बिहारी बाजपेयी आउँदा पनि नेपालका विभिन्न सीमाहरुमा बाँध बाँढ्ने कामलाई निरन्तरता दिइयो । त्यसैगरी चन्द्रशेखरले नेपालको भूमिमा प्रजातन्त्र ल्याएर भारतमुखी बनाउने मार्ग प्रशस्त पारिदियो । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पहिलादेखि नै नेपालमा भारतीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक ब्यक्तिहरुको आगमन जहिले पनि नेपाल माथि थिचोमिचो गर्नका लागि नै आउने गरेका छन् । त्यसैले जब जब नेपालमा भारतीय नेताहरुको प्रवेश हुन्छ, तब तब केही न केही हामी नेपालीहरुले शिर झुक्नु पर्ने वा घाटा सहने अवस्था आइपरेको पाउँछौं ।
भारतीय सेना प्रमुख मणिमुकुन्द नरवाणे हाल चर्चामा छ । यो भन्दा अगाडि उ कालापानी मामलामा नेपालले अरुको इसारामा बोल्यो भन्ने ब्यक्तिको रुपमा चर्चामा आएको थियो । कालापानीमा नेपाललाई उकास्ने चीन, पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, भूटान वा बंगलादेश जो पनि हुन सक्दथ्यो । तर भारतीय उच्च पदस्त ब्यक्ति सेना प्रमुख नरवाणेले एक देश र अर्को देशको कुटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी त्यो बेला नेपालले अरु देशको इसारामा भारतको नयाँ नक्सा बारे टिप्पणी गरेको अभिब्यक्ति दिन पुगेका थिए । अहिले उहीं ब्यक्ति नेपालको भ्रमणमा आउने कुरा सुन्दा नेपाली नेताहरु जो आफूलाई मार्न र हान्न तरवार लिएर अगाडि आउँछ, उनलाई नै रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्न तम्सिरहेको भान पर्न गएको छ । बास्तवमा एक देशको बारे अरु देशमा बसेर बोल्ने ब्यक्तिलाई उक्त देशमा मात्रै होइन कि कुनै पनि देश भित्र हुल्याउन नहुने थियो । एउटा देशको सार्वभौमिकता माथि धावा बोल्ने ब्यक्ति पुनः पल्केर अर्को देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध पनि बोल्न लालायित हुन्छन् ।
गत साताको नयाँ पत्रिकामा भारतीय सेना प्रमुख नरवाणे नेपालको भ्रमणमा आउने जानकारी सहितको समाचार छापेको थियो । यो नेपाली राष्ट्रियताको लागि पनि गम्भीर विषय हुन पुगेको छ । शत्रु र मित्र नचिन्ने हो भने राजनीति गर्नुको अर्थ छैन । राजनीति गर्नेले शत्रु र मित्र दूधको दूध पानीको पानी जस्तै स्पष्ट रुपमा चिन्न सक्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा ज्ञान विचारको हिसाबले परिपक्व ब्यक्तिले नै त्यसको अगुवा गर्न सक्नु पर्ने हो ।
सीधै नेपालको शत्रु, नेपाली सार्वाभौमिकता माथि नै भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्ने ब्यक्तिलाई नेपालमा स्वागत गर्नुको अर्थ के ? नेपाली भूमि मिचेर भारतले बनाएको सडकको नेपालमा तीब्र बिरोध भएपछि त्यसलाई चीनको इसारामा भएको मनगधन्त दावी गर्ने भारतीय सेनाध्यक्ष हरेक राष्ट्रियताको हिसाबले नेपालको शत्रु नै हुनेछ । मणिमुकुन्द नरवाणे ब्यक्तिको हिसाबले आफ्नो देश प्रति इमान्दार ब्यक्ति पनि हुन सक्दछ । तर एक राष्ट्रका लागि भने उनले घाटक अभिब्यक्ति दिने गरेको छ । चीन हालसम्म कसैको पक्ष वा विपक्षमा कराउने गरेको कसैलाई थाहा छैन । यस्तो कुटनीतिक अवस्था सन्तुलन गर्न सफल चीन माथि यो एक गम्भीर आरोप नै मान्न सकिन्छ ।
हामीलाई चीनले उक्सायो र नेपाल करायो भन्नु सरासर झूठ नै हो । वास्तवमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक जस्ता कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमा जन गणना गर्ने ब्यक्ति बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अहिलेसम्म जिउँदैछ । जानाजान उक्त भूमिमा जनगणना गर्ने गणक नै भएपछि त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण अरु के पो चाहियो र ? हात, खुट्टा, आँखा, कान, नाक घाटी रहँदा पनि म मान्छे हुँ भन्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? यो सबै हिसावले अकात्य प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । सुरुमा भारतको मनोहर पारिकट इन्ष्टिच्यूट अफ डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसिसद्धारा आयोजित सेमिनारमा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणेले चीनको इसारामा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा बनेको सडक उद्घाटनको बिरोध गरेको
थियो । उनले अरुका लागि यी विषय उठाएका हुन् भनी सेनाध्यक्षले ठोकुवा गरे । यस्तो ब्यक्ति हाल नेपालको भ्रमणमा आउने समाचारले युवा वर्ग लगायत समाम नेपाली सार्वभौमिकता प्रति सचेत जनता तर्सिरहेको अवस्था छ ।
भारतीय सडक करिडोर बारे विवाद छैन भनी नेपाली भूभागमा बनेको उक्त भारतीय करिडोरको समर्थन गर्ने ब्यक्ति सेनापति, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नै भएपनि अर्को देशको लागि सह्य नहुन
सक्छ । काली नदी भन्दा पश्चिममा सडक बनाएको विषयलाई भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा बनाएको छैन भनिए पनि प्रमाणको आधारमा उक्त भूमि नेपाली भूमि भएको धैरै आधार देखाउन सकिन्छ । नेपालमा किन त्यसको बिरोध भएको हो भन्ने नजान्ने भारतीय सेनापतिले त्यस प्रकारको टिप्पणी गर्दा नेपाली सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्नु स्वाभाविक थियो । मूल नदीभन्दा भित्र पारेर नक्कली काली नदी बनाएको कुरा सेनाध्यक्षले थाहा पाउनु पर्दछ । पछि भारत र बेलायतको उपनिवेश युद्ध भएको बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म नै भएको थिएन । त्यसलाई लिएर भएको १८४० को युद्धमा बेलायती पक्ष हारेको पनि
थियो । पछि १८४२ मा बेलायती साम्राज्यको हात माथि पर्न
गयो । त्यसकारण पनि आजका चिनियाँहरुलाई महाकाली नदी र कालापानी बारे नेपालीहरुलाई जतिकै थाहा नपाउनु स्वाभाविक पनि हो । नेपाल र भारतीय जनता बीचको सम्वन्ध इतिहास भन्दा पुरानो छ । महाभारत काल र रामायण कालमै यो सम्वन्ध सुरु भइसकेको थियो । यस्तो गहन कुरालाई ध्यान नदिएर दुई सय वर्ष अगाडिदेखिको अंग्रेजी साम्राज्यले ओगटेको भारतले नेपाली सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिनु सही कुरा होइन । भारत नेपाल भन्दा निकै नयाँ आधुनिक राष्ट्र हो । त्यसको तुलनामा नेपाल अति पुरानो र बलियो राष्ट्र हो । भारत छोड्दा बेलायती उपनिवेशले आफना दलालहरु मार्फत् हिन्दूस्तान र पाकिस्तान अलग्याए । यसरी हरेक दृष्टिकोणले भारतले इतिहास खोज्ने काम नगरी हचुवाको भरमा लिपुलेक आफ्नो दावी गरिएको पाइन्छ । यस्तो कुरालाई प्रमाणहरु अगाडि नराखी हचुवाको भरमा टिक्का टिप्पणी गर्नु पनि भोलिको लागि हाल सुजबुझ नभएको कुरा जस्तै न्यास्रो पर्न सक्दछ । यस्तो सार्वभोमिकता र राष्टिय अखण्डताको सवालमा नेपाली जनता पनि सजग र सचेत भएर बस्नु जरुरी देखिन्छ । राष्टिय मामला उच्च स्तरको मामला हुनु पर्दछ । यस अवसरमा आउँदो भ्रमणलाई गम्भीर रुपमा हेर्नेपर्ने देखिन्छ ।